Mozika · Desambra, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Mozika · Desambra, 2016
Tantara mikasika ny Mozika tamin'ny Desambra, 2016
Vehivavy Kyrgyz Mpanakanto Mamelona Indray ny Tononkalon'Herimpo Fiantsan-Dehilahy Araka ny Nentin-drazana
Azia Afovoany sy Kaokazy 17 Desambra 2016
Nanozongozona ny sehatry ny mozika ao an-toerana tamin'ny famerenana mahery vaika ny tononkalo maneho herim-po natao ho fototry ny kolontsain'ny firenena Azia Afovoany ilay mpanakanto Kyrgyz Gulzada Ryskulova.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 08 Desambra 2016
Afrika Mainty 04 Desambra 2016
Ny ankamaroan'ny tanora Afrikana tamin'ny taona 50 sy 60 no nahita ny mozika ary nanao ny dingana voalohany tamin'ny dihin'izy ireo niaraka tamin'ny gadona Afro-kiobàna: Cha-Cha-Cha, Pachanga, Charanga, sns. Nanaovan'i Etazonia ankivy, taona vitsivitsy taorian'ny fandresena, nampiasain'ny fitondràna Castro ny mozikany mba hahazoana toerana eo amin'izao tontolo izao.
Amerika Latina 01 Desambra 2016
“Per aspera ad astra” dia midika hoe mahazo laza na dia eo aza ireo fahasarotana. Tanora avy ao Meksika sy Paragoay, monina ankilan'ny fako ary manamboatra izany ho zavamaneno.